Ny herinandro taona mifarana | Hevitra MPANOHARIANA
Ny herinandro taona mifarana
2009-12-30 @ 23:00 in Finoana
Nankalazaina fatratra indray fa fampiatoana ny adiady sy ny fifandirana eo amin'ny sehatra politika indrindra indrindra ity herinandro farany misy ny fetin'ny faran'ny taona ity. Tetikady avokoa anefa izany rehetra izany entina hametrahana milamina izay rehetra tiana apetraka ary ao anatin'izany ny hetsiketsika rehetra ataon'ny mpitondra FAT amin'izao fotoana izao. Koa izay angaha no nidiran'ny mpitondra fivavahana eo amin'ny sehatry ny fiainam-pirenena indray. Maro no tsy mankasitraka izany saingy ny marina eo amin'ny fiainan'ny Malagasy dia miankina mandrakariva amin'ny zava-misy hatrany.
Seraseran'ny tanora: tetika fandambolamboana
Nisy fihaonana nolazaina fa ara-koltoraly, miompana ho an'ny tanora, notontosaina tetsy amin'ny Lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tamin'ny farany sy fiandohan'ny herinandro teo. Raha ny fijeriko dia fomba iray handambolamboana ny tanora sy handrefesana ny fitiavan'ny tanora ny mpitondra ankehitriny io fihaonana ara-koltoraly io. Azo lazaina tsy misy hambahamba fa nandamoka ity hetsika ity amin'ny ankapobeny. Voalohany amin'izany, tsy feno ny tranoheva natsangana teny amin'ity toerana ity. Faharoa, vitsy tsy araka ny noheverina ireo tanora niroboka teny. Nalalaka ny toerana, nalalaka ihany koa ny lalana nifamezivezen'ny olona. Ny loko manga sy laoranjy amin'ny afisy kosa aloha dia efa fambara amin'ny zavatra tian-ko tarafina amin'ity hetsika ity. Dia nanao tsoa-kevitra ny zaatra hitako aho aloha.
Raha nolazaina ho niompana ho an'ny tanora ny hetsika, ireo tranoheva kosa dia ny sampandraharahan'ny minisitera sy ny fikambanana tanora tokana, dia an'ny zanaky ny zandary avy etsy amin'ny cité-ny etsy Ivato seranana ihany no hita teny. Tsy nahitana fikambanana tanora tsy miankina hafa sy fikamban'ny tanora miankina amin'ny fiangonana kosa teny. Mivandravandra avy hatrany ny fahabangana toa mitaratra fa novonjivonjena ny fanaovana ity hetsika ity. Rezimanta-na zandary iray Kamiao ihany koa no nisahana ny filaminana teny, ary sahiko no milaza fa mitovy amin'ny isan'ireo olon-tsotra nitsidika ny toerana ny isan-dry zalahy ireo... azo itarafana ihany koa ny filaminana eto Antananarivo tamin'ny andron'ny alatsinainy maraina nitsidihako azy ity. Gaga aho hoe inona koa no antony mahabetsaka zandary ato anatin'ity fihaonana ity? Mbola tsy naheno izay nitranga teny Ampahibe aho tamin'io fotoana io.
Ilay fikomiana sandoka tetsy Ampahibe
Miala tsiny aho raha tonga dia mitsara ilay zava-nitranga tetsy amin'ny Régiment d'Appui et de Soutien ny maraimben'ny alatsinainy ho fikomiana sandoka avy hatrany. Nandalo teny aho, tanaty fiarakaretsaka, ny alahady hariva ary gaga raha nahatsikaritra fa tsy nahita na dia vata-miaramila iray aza niambina ny vavahadin'ireo toby rehetra teny sy ny vavahadin'ny biraon'ny minisiteran'ny Fiarovana. Mpijerijery hatrany ny zavamisy ny tena, noho izany, efa niahiahy zavatra hafahafa sahady aho raha nanana io tsikaritra io. Amin'ny fotoanan'ny hotakotaka indray ve vao tsy misy miambina ny toby? Na misy fandrika mivelatra eo na efa misy fifanarahana miafina eo amin'ny samy miaramila indrindra fa eo amin'ny lohandohan'ireto miaramila ireto. Efa nisy fanomezantoky eo amin'ny fifanarahana hatao sahady angamba hoe ataovy amin'izay ny iraka nampanaovina anareo fa navelanay malalaka ny toerana hanaovanareo azy!
Tsy tena gaga loatra aho ny maraina raha nandre fa nisy fikomiana nataona vatamiaramila notarihina manamboninahitra lefitra tamin'ny toby iray tetsy Ampahibe ity. Vao maika moa tsy gaga mihitsy aho raha nandre fa voafehy vetivety ihany ilay fikomiana sady nanaiky hosamborina mora foana ilay mpitarika ity fikomiana sandoka ity. Dia efa fandre sy mahazatra ihany koa raha malaza avy hatrany fa nahitana volabe teny an-toerana ary nanaiky avy hatrany ireo mpandray anjara fa nandray vola tamin'ny fanaovana ity fikomiana ity. Dia nisy koa ny solombavam-bahoaka notondroina no nanome ny vola hanaovana ilay hetsika. Hita avy hatrany fa fihetsiketsehana fotsiny no betsaka ary misy ny fandrihana. Raha misy olona manakarama amin'ny fanaovan-javatra toy itony tsy hisehoseho ho hitan'ny mpanatanteraka rehetra izy fa olona iray ihany raha be dia ny olona manelanelana azy sy ny lehiben'ny mpikomy no isehoany. Na iza na iza manao zavatra toy itony dia izany no fitandremana bitika indrindra tokony atao. Izay no ahafaha-milaza fa tetika handotoana olona sy hamandrihana andia-miaramila tsy manaiky hofehezin'ny mpitondra ao amin'ny FAT no nanaovana ity hetsika hafahafa ity. Taty aoriana moa dia nisy vohikala nilaza fa hay iray amin'ny niandry kendritohina ny minisitry ny fiarovana ny Amiraly Mamy Ranaivoniarivo tamin'ny volana marsa 2009 ity lehiben'ny mpikomy teny Ampahibe ity.
Mifanindran-dalana manamafy ny tetikady miaramila ihany koa ny famoriana nataon'i Vital tetsy amin'ny Tranom-Pivoriana Iraisam-pirenena Ivato ho an'ny mpitandro ny filaminana rehetra. Ity famoriana ity no miampanga tena ireo atidoha nikotrika ity fikomiana sandoka ity. Niantso indrindra indrindra ireo lehibe isan-tsokajiny eo amin'ny tafika sy ny zandary ary ny polisy manko ny lehilahy tamin'ity fotoana ity. Teo amin'izay no nambara fa iray tsy mivaky ny tafika sy ny mpitandro ny filaminana. Mihevitra manko ry zareo amin'io fotoana io fa tonga soa aman-tsara eo amin'ny tanjona notratrariny ny paika napetrak'izy ireo. Ilay fikomiana voafehy dia enti-maneho na amin'ny miaramila na amin'ny sivily fa tsy azo hozongozonina intsony ny rafitra efa napetraka amin'izao fotoana izao. Fampitandremana mialoha ireo izay manam-pikasana fa efa tsy mandeha ilalana intsony izany fanonganam-panjakana na fiokoana ankoatra ny efa vitany izany. Eo ihany koa ny fametrahana fifampiahiahiana eo amin'ny samy mpitandro ny filaminana fandrao misy ny mihevitra ny hanohintohina ny fahefan'izy ireo izany. Tsy dia sarotra vinaniana intsony noho izany izay mety ho nandehanan'ny Komandy voalohan'ny zandarimaria ny jeneraly Razafindrakoto Bruno Wilfrid teny amin'ny Tobin'ny Hery Vonjy Taitra Ivato rehefa tsy hitan'izy ireo tao amin'ny Tranom-Pivoriana Iraisam-pirenena ny Komandà Roger Luc. Diplaomasia ara-miaramila izany na dia mody lazaina aza fa tsy manao sy tsy mahay diplaomasia izany ny tafika. Hatreto izany dia azo ambara fa voafehy eo ambany fahefana tokana ny tafika iray manontolo.
Nandritra ny andron'ny alatsinainy maraina ihany koa dia nisy fotoam-pivavahana lehibe nokarakaraina mpitandrina roa no niakatra telo, nahatratra sivy ary lasa ampolony vitsivitsy avy eo teo amin'ny kianjan'Antsahamanitra, 200 metatra eo ho eo miala ny Lapam-panjakana Ambohitsorohitra. Tsy azo lavina velively fa ny mpitandrina FJKM no maro an'isa amin'izy ireo na dia misy ihany koa aza ireo avy amin'ny fiangonana hafa. Antony maro no mahatonga izany fa izay tadidiko etoana ihany no ho voambara mazava loatra. Voalohany amin'izany, eo amin'ny lafiny ara-tantara : Ny Protestanta amin'ny ankapobeny dia tsy manaiky hofehezina na hoziogain'olona iray na vitsivitsy na oviana na oviana. Tsy anavahana na iza na iza io, indrindra fa avy amina mpitondra politika (ary tafiditra amin'izany tsy ekeny hanazioga azy izany ihany koa ny filoha Ravalomanana, ialana tsinyamin'ny mpanaraka satria izay no zava-misy). Mitady matetika ny fifandanjana izy ireo, koa tsy atao mahagaga loatra raha misy ny fiangonana (protestanta) no misedra olana noho izay fisainam-pahafahana tandroviny izay.
Faharoa : Tsy vitsy mihitsy ihany koa ny mpitondra fivavahana ao aminy no tsy manaiky ny isian'ny fifangaroana na fifampidirana eo amin'ny politika sy ny fiangonana, izany hoe diso ny filazana safobemantsina avy hatrany hoe Ravalomanana = FJKM satria nomena fahafahana ny olona tsirairay hanaraka ny safidy politika tiany arahina ary tsy manan-jò hanery ny mpivavaka ao aminy hanaraka ny safidy politikany ny mpitandrina. Tsy manaiky ny fiangonana raha idirana politika hitantana ny firenena ny anarany nefa tsy hain'ny fiangonana leferina mihitsy ihany koa ny fitsabahan'ny politika amin'ny resa-piangonana. Ohatra tsy misy mpahalala loatra amin'izany, tamin'ny Repoblika voalohany dia nisy ny fanerena nataon'ny fitondrana ny tsy maintsy hametrahana saina ao am-piangonana. Natahotra na nanoa izany baikon'ny fitondrana izany avokoa ny fiangonana rehetra ankoatra ireo izay nanorina ny FJKM. Nanao fandrahonana ny fitondrana fa hakatona avokoa izay fiangonana tsy manaikyny hametrahan sainam-pirenena ao am-piangonana fa tsy nampihontsona ny FJKM, "Akatony ary!" no valinteny nataony. Tsapan'ny mpitondra fanjakana fa tsy azo nahodi-doha ny protestanta reforme ka dia tsy nampihariny indray ny fandrahonana hanakatona ny fiangonana FJKM rehetra.
Koa nahoana ary ireto mpitondra fivavahana ireto no toa minia miditra an-tsehatra amin'ny resaka politika? Valiny: Niditra any amin'izay tsy tokony idirany ao amin'ny fiangonana ny mpitondra fanjakana mpanao politika ka niseho amin'ny maha-protestanta azy ny FJKM indrindra indrindra. Ohatra: efa nomena alalana hanitatra ny fiangonana ny FJKM Antanimena atsinanana (tsy miankina izy ity teo alohaloha teo) no norarana indray tsy hanao izany; efa natomboka anefa ny fandravana hanaovana ny fanitarana; inona no tena tadiavin'ny mpitondra fanjakana? Nitakian'ny fanjakana hetra ihany koa ny foibe FJKM ary tafiditra ao anatin'izany (araka ny gazety Tia Tanindrazana nivoaka 30 desambra 2009) ka ao anatin'izany ny IBS (Impots sur les bénéfices de la Société) taona 2006, 2007 ary 2008... izany hoe napetraky ny mpitondra fanjakana ho raharaham-barotra misy tombom-barotra izany ny raharaham-piangonana. Mafy loatra angaha ny fitadiavam-bola no tonga amin'izany izy ity. Efa saiky noadinoina ny saika hanaovana barofo ny fitaovam-panorenana ny sekoly FJKM tamina tanàna lehibe vitsivitsy teto Madagasikara.
Manaraka izany, nandritra ny vavaka fifonana no netina nanambarana fa mangatsiaka tanteraka amin'izao fotoana izao ny fifandraisana eo anivon'ny FFKM, fomba enti-milaza izany fa anarana sisa izany FFKM izany fa nopotehina avy ao anatiny nandritra ny telovolana voalohan'ny taona 2009 ihany io sehatra nanana ny anjara toerany teo amin'ny fiainam-pirenena io, nefa tsy nitady toerana eo amin'ny fitondrana amin'ny maha-FFKM azy fa mpandamina sy mampihavana ary mpanelanelana mandrakariva rehefa tojo krizy ny firenena. Mahatsapa ho manana andraikitra hijoro ho mpandamina, tahaka ny nataon'ny FFKM nandritra ny andro nampalaza azy ireto mpitondra fivavahana ireto. Tsy mitady seza izy ireo saingy mitady kosa ny vahaolana ho an'ny firenena mba tsy idirana amin'ny ady an-trano sy ny fanaovana herisetra ary ny tsindry hazolena isan-karazany eo amin'ny fiaraha-monina.
Ity eto ity kosa dia hevitro manokana, miditra na mikasa ny hiditra eo amin'ny fitantanana ny firenena ny tafika izay mitazona ny fitaovam-piadiana eto amin'ny firenena. Sarotra ny hifehy na hanaramaso ny olona mitazona ny fitaovam-piadiana tsy hanakana ny fahafahan'ny tsirairay. Ho fisorohana izay mety ho fihoaram-pefy sy fikorisana mankany amin'ny tsy refesi-mandidy izay dia mety indrindra ny idiran'ny sehatra ara-panahy ho tsindry lentam-pahefana (hisian'ny fitovian-danja eo amin'ny mizana) amin'izao fiainam-pirenena latsaka lalina anaty krizy novolena izao. Azoko heverina fa singa tsy ampoizin'ny mpitondra fanjakana ny fijoroan'ireto mpitondra fivavahana ireto. Raha efa tadiavin-dry zareo amin'ny fomba rehetra manko ny hanagiazana ireo mpitari-tolona ao amin'ny ankolafy telo, ka anatin'ny teti-panorona ilay fikomiana sandoka tetsy Ampahibe, dia sarotra ihany satria hiteraka rikoriko ho an'ny sarambambem-bahoaka raha ireto mpitondra fivavahana ireto no hampangaina ho manao baomba ny mikasa ny hikomy ara-miaramila. Raha sanatria ka tsy afa-mikofoka intsony ny mpitaky ny ara-dalàna dia efa vonona sahady ireo sahy hifanandrina am-panahy ny fitondrana ankehitriny. Ao amin'ireto mpitondra fivavahana ireto aza no misy ny charisme tsy ampy teo amin'ny mpitari-tolon'ny ara-dalàna. Ny maha-hafa ireto indray kosa dia mifankafantatra avokoa ny ankamaroan'ny mpitondra fivavahana ka sarotra ihany ny hisian'ny mpitsikilo avy amin'ny fanjakana. Mety hisy ihany anefa izany mpitsikilo hanao tatitra ny fivoriana natao hanomanana ny hetsika izany fa mety ho mora fantatra.
Ilay fotoam-pivavahana teo Antsahamanitra
Ninia aho nanasaraka ny fotoam-pivavahana sy ny antony nanaovan'ny mpikarakara ity hetsika ity. Fanamarihana voalohany: tsy tao anaty fotoam-pivavahana velively no nanaovana ny fanambarana izay efa navoakako manontolo tsy nanampiana tsy nanalana teto ihany. Efa vita tanteraka ny tso-drano sy ny Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina vao nolazaina ny fanambarana. Diso ihany koa ny vaovao iniana aely fa tsy nivonona hiandry izany fanambarana izany velively ireo nanatrika ity fotoam-pivavahana ity. Tena niandry zavatra tamin'ireto mpitondra fivavahana ireto mihitsy ireo nanatrika tao ary porofon'izany ny tehaka sy ny horaka sesilany nisy nandritra ny nanaovana izany fanambarana izany. Ambarako sahady ary fa amin'ny Asabotsy 2 janoary amin'ny 2 sy sasany tolakandro ny fotoana manaraka hihaonan'ny olom-pirenena rehetra amin'ireto mpitondra fivavahana ireto eny Antsahamanitra ihany.
Betsaka ihany ny olona tonga teny amin'ny maha-andavanandro maraina ny fotoana tamin'ny alatsinainy teo satria fenony tsara ny antsasak' Antsahamanitra. Vao miditra ianao dia ny sora-baventy manao hoe "Dia nahonena Azy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry" Matio 9:36 no sora-baventy hitanao eo amin'ny sehatra. Ny tena maro an'isa amin'ireo olona nanatrika teo dia olona efa lehibe heverina ho efa retirety amin'ny asany avokoa, izaho kosa moa mba tsy niasa aho io alatsinainy maraina io ka nanararaotra nankeny, indrisy moa fa tsy ho afaka hanatrika ilay amin'ny Asabotsy aho noho ny asa ihany, nefa azo inoana sahady fa ho maro noho ny tamin'ny alatsinainy no ho avy amin'ny Asabotsy io.
Ireo teny novakiana tamin'io andro io dia hita ao amin'ny bokin'i Estera 4: 14 - 17 miaty ny resak'ilay Estera anisan'ny vadin'i Ahasoerosy (Xeres) nanjaka hatrany Etiopia ka hatrany India tamin'ny dadatoany antsoina hoe Mordekay fa misy ny tetika handringanana ny jiosy manerana ny fanjakana ka nahatonga an'i Estera hilaza hoe: " Mandehana Ary, vorio ny Jiosy rehetra izay hita ato Sosana, Ary mifadia hanina noho ny amiko, ka aza mihinana na misotro hateloana na andro na alina; Ary izaho sy ny ankizivaviko hifady toy izany koa, Ary amin’izany no hidirako ao amin’ny mpanjaka, na dia tsy araka ny lalàna aza; koa raha sanatria maty aho dia izay izany no izy." izany hoe eo amin'ny fanapahan-kevitra lehibe izay hatao dia ny mivavaka no atao voalohany indrindra.
Ny vakinteny faharoa kosa dia izay hita ao amin'ny Matio 26: 36 - 46 milaza ny fitarihana nataon'i Jesoa tao Getsemane, fantany tsara fa hiatrika zava-dehibe eo amin'ny fiainany ihay koa izy ka nitokana nivavaka manao hoe: " Raiko ô, raha azo atao, dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity; nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao." Tao anaty fahoriana sy alahelo indrindra no nanaovany izany vavaka izany. Na ny vakinteny voalohany na ny vakinteny faharoa dia samy manambara ny anjara toeran'ny vavaka manoloana ny fanaphan-kevitr alehibe izay hatao ary mihatra aman'aina mihitsy izany. Ny mpamaky baiboly dia mahafantatra fa nivoaka nandresy fa tsy maty i Estera sy ny Jiosy tao amin'ny vakinteny voalohany nefa maty ihany i Jesoa na dia namerimberina ny vavaka nataony aza amin'ity vakinteny faharoa ity.
Ny vakinteny fahatelo kosa dia izay hita ao amin'ny Asan'ny Apostoly 4: 23 - 31 ahitana ny vavaka mahery nataon'ny Apostoly sy ny mpianatra fa sahy tokoa izy ireo ny hijoro vavolombelona nitory ny tenin'Andriamanitra na dia norarana tamin'izany aza ary na dia nandrahona sy nampitahotra avokoa na ny jiosy na ny jentilisa na ny mpitondra. Ny fandrahonana natao tamin'ny mpitarika no niitaran'ny fitoriana hotanterahin'ny rehetra tamim-pahasahiana. Ny toriteny kosa moa dia niainga avy tamin'ilay andinin-tSoratra Masina efa malaza ao amin'ny bokin'i Estera 8:6 manao hoe: "Ataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko.
Raha fehezina ny toriteny dia toy izao: "Sahia mandray andraikitra". 1. Ny hetsika voalohany tokony atao dia ny tsy mihetsika... fa mivavaka.2. Rehefa hihetsika kosa amin'izay dia tsy ny tapany fotsiny no mihetsika fa ny vatatena manontolo no mihetsika.3. Manana tanjona mazava hotratrarina ho fijoroana vavolombelona. Ny hetsika tsy misy tanjona mazava manko dia ho ezaka verimaina ihany.4.Fahavononana hisedra ny mafy, hoy ilay mpitoriteny iray antsoina hoe Saddhu Seddhar Sung hoe tsy misy ny La Couronne raha tsy misy aloha ny La Croix.5. Tsy voatery ho andraikitra lehibe no andraikitra omena antsika fa eo amin'ny toerana misy anao no iantsoan'Andriamanitra anao ho vavolombelona. Io dia araka ny tenin'ilay mpitondra fivavahana mainty hoditra Amerikana malaza iray antsoina hoe Martin Luther King hoe: "Na mpamafa lalana aza ianao, ataovy ho toy ny tsapan'ny anjely mety handalo eo fa olon'Andriamanitra no namafa ny lalana teo". Tsy misy olona noho izany ka hamaivanina ny anjara toerany.
Farany : resaka hafa mihitsy Araraoty fa ity faran'ny taona ity ihany koa no hanoloranao ny Best of Malagasy blogs ankafizinao. Na efa nisy nifidy aza dia apetaho ihany satria mikaonty ho anaty fisafidianana ny fahamaroan'ny bolongana na blaogy iray. Dia samy tratran'ny farany izany ary hiatrika Tolona vaovao indray anie e!
Jentilisa, 31 desambra 2009 amin'ny 01:05
sefo oui sefo
mbola tsy novakiako ity sefo
@ erin-taona sefo
mirary soa sefo
bonne fety sefo
Nampidirin'i simp @ 14:39, 2009-12-31 [Valio]
BOnne année Jentilisa dia mirary soa hatrany ho anao aho.
Nampidirin'i Kdaombaramita @ 20:37, 2010-01-01 [Valio]